आखिर कसरी बनाइन्छ सेक्स रोबोट ? थाहा पाउँदा के होला ? - eKhojkhabar
आखिर कसरी बनाइन्छ सेक्स रोबोट ? थाहा पाउँदा के होला ?
एजेन्सी, । यतिबेला रोबोटले विश्व बजार तताईरहेको छ । जटिल किसिमका कार्य गर्नेदेखि लिएर सामान्य समस्याको पनि समाधान गर्न रोबोटको नै प्रयोग भईरहेको छ । हुँदाहुँदै मानिसहरुको प्राकृतिक प्रक्रिया सेक्सको प्यास मेटाउने माध्यम पनि रोबोट नै बनिरहेको छ । यो सेक्स रोबोट विश्वको सबैभन्दा विवादित विषय बनिरहेको छ ।
आफ्नो परिचय दिनासाथै ‘आइ लभ यू’ भन्ने सम्यान्था नामक सेक्स रोबोटले लामो समयसम्म विश्वको ध्यान केन्द्रित गराएको थियो । सुन्दर सुनौलो कपाल र नीलो आँखाका कारण सम्यान्थाले जुनसुकै पुरुषको मन लोभ्याउन सक्ने बताइएको थियो । तर समान्थ्या बच्चाहरु र परिवारका साथै बस्ने खबर आएपछि भने जताततै यसबारे चर्चा भएको थियो । उनलाई इन्जिनियर सेर्गी सैन्टोसले बनाएका हुन् ।
तिनै सेर्गीले आफ्नो कारखाना भित्रका तस्बिरहरु सार्वजानिक गर्दै सेक्स रोबोट कसरी तयार पारिन्छन् भन्नेबारे जानकारी दिएका छन् । बेलायतका टिभी सञ्चालकले उनको सो कारखानाको भ्रमण गरी रिपोर्ट तयार पारेका थिए । उनले बनाएका सेक्स डलको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विशेषता भनेको तिनीहरुलाई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सका साथ निर्माण गरिनु हो, जसको अर्थ तिनीहरुले हाम्रो कुरा बुझ्ने देखि लिएर जवाफ समेत दिन सक्छन् ।
उनको सो कारखानाको चारैतिर तिनै डलहरुको टाउको, हात, कपाल र अन्य शरीरका भागहरु छरिएका थिए । यी सबै रोबोटहरुलाई सकेसम्म वास्तविक मानिसको रुप दिने प्रयास गरिन्छ । यी रोबोटको छालाका भित्र सेन्सरहरु लगाइएका हुन्छन् जसकारण उनीहरुलाई हामीले छुँदा प्रतिक्रिया दिने गर्छन् । यसबाहेक यिनका शरीर पनि लचिलो र जतापनि फर्काउन मिल्ने बनाइएको हुन्छ ।
यसलाई तपाईले सजिलै बोकेर जतापनि लैजान सक्नुहुनेछ । चाहेमा यिनीहरुसँग कुरा समेत गर्न सकिन्छ । खबरका अनुसार यस्ता सेक्स डलको उद्योगले हरेक वर्ष २३ बिलियन यूरोको कमाई गर्ने गरेको छ । सेर्गीले बनाएको एउटा सेक्स डलको मूल्य मात्र ४ लाख रहेको बताइएको छ ।
हाँसो रोक्न नसकिने अचम्म लाग्दा तस्विरहरु !
सोनम कपुरको स्तन प्रष्ट देखिने यो अवतार ? हेर्नुस स्तन देखिने तस्विरहरु (फोटो फिचर)
यी बलिउड अभिनेत्रीहरु जसले भित्रीवस्त्र लगाउनै भुले !(फोटो सहित)
१९ वर्षीय यी युवतीको कम्मरले तान्यो विश्वलाई, जसलाई देखेर मानिस छक्क पर्छन्
कोरियन युवतीहरुले किन पाल्छन् काखी र योनीमा रौँ ? (तस्बिर सहित)
ब्रिटिश मोडल डेमी रोजको यस्तो पनि ड्रेसअप (फोटोफिचर)